जीवनको कथा लुकेको ईश्वरको ‘लीला’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
जीवनको कथा लुकेको ईश्वरको ‘लीला’
काभ्रेको तिमालका ईश्वर थोकर, भक्तपुरमा बस्दै आएका छन्। आफ्नो बाल्यकाल भक्तपुरका इँटासँग खेल्दै, भक्तपुरेहरूसँग संगत गर्दै, भक्तपुरका मठमन्दिर, पाटीहरूमा खेल्दैहुर्केका कारण उनी भक्तपुर भन्नेबित्तिक्कै हुरुक्कै छन्। अहिले पनि भक्तपुर बस्दै आएका उनी छोटो कविता लेख्न सिद्धहस्त व्यक्ति हुन्। छोटो कविता लेख्ने कविको छवि बनाउन सफल ईश्वर थोकरको हालसालै ‘लीला’ (शृङ्खाल कविताको संग्रह) प्रकाशित भएको छ।
कुनै व्यक्ति, घटना, दिनलाई पनि निकै महत्त्व दिने अन्तरमुखी स्वभावका ईश्वर नियमित रूपमा डायरी लेख्छन्। व्यक्तिसँगको भेट उनको डायरीमा भेटिन्छन् तर निकै संक्षिप्त रूपमा। यो पनि उनको नखुलेको परिचय हो। संस्मरण लेख्न विशेष रुचि भएका थोकर तामाङ भाषा र नेपाली भाषामा साहित्य रचना गर्छन्। कुनै राम्रा रचनाहरूलाई तामाङ भाषामा समेत अनुवाद गर्ने खुबीमा ईश्वर थोकरले पिङ्गाई(गजल संग्रह, २०६८), प्लिक्सी (कविता संग्रह,२०६९), नोरी(कविता संग्रह, २०७४) ल्हुइला गोङमा(संस्मरण, २०७६) प्रकाशित छन्। तामाङ ग्योइकाई पुरस्कार, २०७१ बाट सम्मानित उनी अहिले कोसिस संस्थामा आबद्ध छन् । जीवनको महत्त्वपूर्ण समय कष्टका साथ बिताएका र अहिले पनि मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन नसकेका ईश्वर थोकरको जीवनलीलामा ‘लीला’(उनकी जीवनसंगिनी) को प्रवेशपूर्व, प्रवेश समय र प्रवेशपछिको अवस्थालाई उनले निकै छोटो कवितामा अभिव्यक्त गरेका छन्।
उनको पछिल्लो कविता संग्रह ‘लीला’मा जम्मामा चौध कविता छन्। कवितामा उनले प्रेमी र प्रेमिकाका भावनाहरू समेटेका छन्। प्रायः प्रेमी–प्रेमिकाका समस्याहरू तुलनात्मक रूपमा साझा हुन्छन्। त्यही साझा समस्यालाई प्रकट गर्ने तरिका फरकफरक हुन्छ। कवि थोकरले पनि ती समस्यालाई कवितात्मक रुपमा व्यक्त गरेका छन्।
ईश्वर थोकर, कवि
कवितालाई प्रेम गरेका, कविताका विम्व, प्रतीकसँग खेल्दै कविता जन्माउँदैहुर्केका कवि थोकरका कविता छोटा तर चोटिला छन्। एउटा सिंगो महाकाव्य, उपन्यासले बोकेको कुरा उनी ५/७ लाइनको कविताले खँदिलो बनाउँछन्। यो उनको विशेषता र मौलिकता दुवै भन्दा फरक नपर्ने तथ्य ‘लीला’ भित्रका कविताहरूले प्रतिविम्वित गरेका छन्।
म आवारा थिएँ– सेमह्रो !
हो, प्रेमको शक्ति नै यही हो, प्रेमले सिर्जना, सकारात्मकतातर्फ मानिसलाई डोरयाउँछ। बाँच्ने, बचाउने प्रेरणा हृदयपटलबाट दिन्छ। उनका कविताहरूमा पनि यही प्रेरणा भेटिन्छ। मानसिक वार्डमा रहँदा पनि, दुःखकष्टलाई जीवन ठानेर अघि बढेका उनको जीवनमा लीलाले जीवनप्रतिको आदर्श रङ पोत्न थालेपछि आएको परिवर्तनको प्रतिरूप लीला हो।
उनी अगाडि लेख्छन् –
शरम लाग्छ– सेमह्रो !
सशरीर भेट्नुअघि नै
तिमीले गर्वसाथ भनेकी थियौ–
‘तिमी मेरा लागि योग्य छौ।’
नभन्दै ईश्वरकी लीला(लीला पुनमगर) भन्छिन्, ‘ईश्वरको हँसिलो मुहार देखेर म मनमनै लोभिन्थें। उनको नजिक पर्न चाहन्थे। उनलाई तुरुन्तै जीवनसाथी बनाउन चाहन्थें। उनीसँगै जिउन चाहन्थें। उनीसँगै मर्न चाहन्थें। यसरी परिकल्पना गरेको दश वर्षपछि उनलाई मैले जीवनसाथीको रूपमा पाएको छु। थ्याङ्क्स गड !’ वास्तवमा ईश्वरको ‘लीला’भित्रका सबै कविताहरूको गर्भ नै ईश्वरकी लीलाले अभिव्यक्त गरेको भावना हो।
कवितामा ईश्वर अघि बढ्छन्,
एकजोर सुझाव दिएकी थियौ–
र, केटीको पछि नलाग्नु।’
के म त्यस्तो छु र
उनका कविताहरूमा कथा लुकेको छ प्रेमी–प्रेमिकाको, जीवनको, भविष्यको। ईश्वरको लीलाका कविताहरूलाई किशोर साहित्यमा राख्न सकिन्छ। उनका कविताहरू प्रेमका कुनै गहकिला उपन्यास, कथा पढेजस्तै आभाष हुन्छन्।
जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छन्, यही नै जीन्दगीको सौन्दर्य पनि हो। यही सौन्दर्यलाई पछ्याउँदै बाँचिरहेका ईश्वरको लीलाले बोकेको प्रेमिल कविताहरु सामान्य मानिसदेखि आलिसानको जीन्दगी भोगिरहेकाको दैनिकी समेटेको छ। अन्तिममा उनी थप्छन् :
जीवन यसैगरी बग्दै जाने हो।
तामाङ, मगर भाषाका शब्द टिपेर लेखिएका कविताहरुले उनका कविताहरुको सौन्दर्य बढाउन सहयोग गरेको छ। कवितामा अर्कै स्वाद भरेको छ। आदिवासी शब्द टिपेर उनिएका उनका कविताहरुको यात्रा अझ सुगम बनोस्।
पुस्तक : लीला
कवि : ईश्वर थोकर
प्रकाशक : स्वीकृति थोकर
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७८ १५:१३ शनिबार
अक्षर ईश्वर थोकर